“Waa In Dalka Loogu Soo Celiyaa Saranyta Sharciga” Madaxweynaha Itoobiya Ayaa Sidaasi Sheegay | Raadgoob
“Waa In Dalka Loogu Soo Celiyaa Saranyta Sharciga” Madaxweynaha Itoobiya Ayaa Sidaasi Sheegay
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka ee Itoobiya Dr Mulatu Tashome ayaa sheegay iney dowladdu gacan bir ah ku qabaneyso kooxaha dalka gudahiisa qalaalasaha ka wado.
Madaxweyne Dr Mulatu oo Khudbaddiisa sanadlaha ah u soo jeediyey Golayaasha wakiillada shacabka iyo Federeeshiinka ee dalka Itoobiya ayaa wuxuu sheegay ‘inuu Itoobiya sanadki tagay uu u ahaa sanad ay isbeddello badan ka dhaceen dalka’.
“Inkasta oo ay dalku u soo hoydeen guulo badan oo dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada haddana qorshooyinkii hormarka ee la rabay in dalka laga hirgeliyo sidi la rabay uma suuragelin”.
Waxaa waddanka qaybahiisa kala duduwan ka dhacayey falal sharci darra ah oo saameyn weyn u geystay amniga iyo xasiloonida dalka.
Daldaloollada dhinaca amniga ee dalka ka muuqday qaarkood waxaa sababay ayuu yiri su’aalo ka dhashay baahiyaha aasaasiga ah oo ay muwaaddiniinta dalka sidi la rabay u helin.
Image captionMadaxweynaha Itoobiya Dr Mulatu Tashome oo labada gole la hadlayo
Cabashooyinka ay shacabku qabaan iney dowladdu degdeg uga jawaabto wey ku qasban tahay oo waxaa ku qasbaya xaaladda isbeddelka uu dalka ku jiro.
‘Wuxuuna madaxweynuhu sheegay iney dowladdu wixi hadda ka dambeeya ay u dulqaadan doonin kooxaha qaska iyo qulqulatooyinka ka wada dalka’.
“Ciddii cabasha sharci ah qabta waxay cabashadeeda ku soo gudbin kartaa nidaam sharci ah balse in ay dad aan waxba galabsan dilaan, dhaawacaan oo ay hantidooda burburiyaan wixi hadda ka dambeeyo uma oggolaan doonno” ayuu yiri.
Qowmiyadihi iyo bulshooyinki walaalaha ahaa ee qarniyada walaaltinimo iyo isjeceyl ku wada noolaa in la kala geeyo ayaa dalka ku soo badaneysay bilihi aan aan soo dhaafnay.
Image captionGolaha wakiillada shacabka Itoobiya
Dad aan yareyn ayaa naftooda ku waayey, malaayiin qof ayaa barakacay, deegaannadi ay muddooyin badan si nabadgalya ah ugu noolaayeen, qaarbaa hantidi ay lahaayeen laga fara maroojiyey.
Falalka noocaasi oo xasiloonida, ammaanka iyo sarreeynta sharciga wax u dhimaya cid kasta oo ku lug lahayd waxaan leennahay ayuu yiri qaska aad waddaan gacmaha ka laabta.
Muwaaddinka maalkiisa iyo naftiisaba iney ilaaliso dowladda xil ayaa ka saaran wixi hadda ka dambeeyana waajibkaasi dastuuriga ee saaran waxay u gudan doontaa ayuu yiri si sharciga waafaqsan.
Guud ahaan, sarreynta sharciga dalka Itoobiya waxaa soo food saaratay Khatar aad u weyn, waddan haddii ay sarreynta sharciga wiiqanto waxay u horseedi kartaa dhibaatooyin bulsho iyo mid siyaasadeed oo ay ka dhalan karaan dagaalla sokeeyo oo ay dhiig badan ku daataan dalkuna uu sidaa ku kala tago.
Haddaba, hay’adaha ammaanka ee dalka waxaan farayaa ayuu yiri iney qaadaan tillaabbo kasta oo ay ku ilaalinayaan nafta iyo maalka muwaaddin kasta oo dalka Itoobiya ku nool.